အမေဇုန်တွင်သင်ဝယ်ယူနိုင်သောစိတ်ပျက်ဖွယ်အရာများ Gadget သတင်း
အမေဇုန်တွင်သင်ဝယ်ယူနိုင်သောစိတ်ပျက်ဖွယ်အရာများ (၉) ခု
အမေဇုံ သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသော virtual စတိုးဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားသည့်စတိုးဆိုင်ကြီးတစ်ခုသည်အလွန်အသုံးဝင်သောပစ္စည်းများစွာကိုရောင်းချသကဲ့သို့၊ တကယ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ပစ္စည်းများအများကြီး, ငါတို့နီးပါးဆက်ဆက်နှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ထင်နိုင်ရာနှင့်မတူဘဲတစ်ဒါဇင်နေ့စဉ်ရောင်းချကြသည်သော။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်ဤပစ္စည်းတစ်ခုထက်မကကိုသတိမပြုမိဘဲပင်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာဒီဆောင်းပါး ၉ ခုကိုမင်းတို့ပြချင်တယ်၊ အဲဒါကစိတ်ပျက်ဖွယ်ရာလို့မသတ်မှတ်သင့်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထဲကတချို့ဟာသူတို့ကိုချစ်မယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအနည်းဆုံးတော့ထူးဆန်းတယ်လို့ပြောကြလိမ့်မယ်။
သူတို့တွေဟာဘယ်လောက်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အသုံးမကျပုံပေါက်နေစေကာမူကျွန်တော်တို့ကိုမင်းတို့ပြသမယ့်အရာတွေကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်ဆိုတာငါတို့သိပြီးသားပဲ အရာဝတ္ထုတစ်ခုစီ၏ဖော်ပြချက်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေဇုန်အတွက် ၀ ယ်ယူရန်အချိတ်အဆက်တစ်ခုကျန်ခဲ့သည်သင်သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းလမ်းဖြင့်ရနိုင်ပြီးသင့်အိမ်၌နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ရနိုင်သည်။
သငျသညျ hallucinate နှင့်အံ့သြဖို့အဆင်သင့်?ပြီးတော့အဲဒီမှာငါတို့က Amazon မှာလူတိုင်း ၀ ယ်နိုင်တဲ့စိတ်ပျက်ဖွယ်အရာ ၉ ခုကိုသိတော့မယ်။
1 နှာခေါင်း Shape Gel Dispenser
3 ယူရို 500 အိမ်သာစက္ကူ
4 GoGirl အမျိုးသမီးဆီးကိရိယာ
8 က Nicolas Cage ကူ
9 ကိုယ့်ကိုကိုယ်စွန်းထင်းခြင်းမရှိဘဲသက်သာအောင် Poncho
နှာခေါင်း Shape Gel Dispenser
သင့်အိမ်တွင်ရိုးရာရေချိုးကန်အစားရေအိုးတစ်လုံးရှိပါကသင်သည်အကယ်စင်စစ်သင့်တွင်ရှိသည် သင့်ဘဝကိုအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေသောဆပ်ပြာပေးစက်။ စျေးကွက်ထဲတွင်ရွေးချယ်ရန်မတူညီသောမော်ဒယ်ရာပေါင်းများစွာရှိသော်လည်းဤတစ်ခုသည်ရယ်စရာကောင်းသည်၊ ပျော်စရာကောင်းသည်။ nရာနှာခေါင်း သူကဆပ်ပြာကိုပစ်ချလိုက်တာနဲ့မင်းကရေချိုးခန်းထဲမှာမလှုပ်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အစိမ်းရောင်ဂျယ်လ်ဂျယ်လ်နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းကရယ်စရာဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုအိမ်တွင်ရေချိုးရန်သူငယ်ချင်းများကိုမဖိတ်ဘဲမဟုတ်လျှင်သင်ပြနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
Amazon မှတစ်ဆင့်နှာခေါင်းဂျယ်ထုတ်ဆေးကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။.
ကျနော်တို့အလှဆင်ဆက်လက်လိုလျှင်? ငါတို့ရေချိုးခန်းလည်းဒီဝယ်နိုင် လူကြိုက်များသော Polaroid ကင်မရာများကိုတုပသည့်ရယ်စရာအိမ်သာသုံးပစ္စည်းဖြန့်စက်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်အထက်ပုံထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်အားလုံးမြင်နိုင်သကဲ့သို့မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်လက်တွေ့ကျသည်မှာအိမ်သာစက္ကူထွက်ပေါ်လာပုံကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
Amazon မှတစ်ဆင့် Polaroid ကင်မရာပုံအိမ်သာစက္ကူသုတ်ဆေးကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည် ဒီမှာ.
ယူရို 500 အိမ်သာစက္ကူ
နောက်ဆုံး၌ပြီးပြည့်စုံသောရေချိုးခန်းရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကိုက်ညီသည့်အိမ်သာစာရွက်ရှိရမည်။ ငါဒီအနုပညာကိုယူထားတဲ့ယူရို ၅၀၀ တန်တဲ့ငွေစက္ကူတွေနဲ့ရွေးလိုက်တယ်၊ အဲဒါဟာ ၁၀ ယူရိုနီးပါးလောက်တန်တယ်၊ ဒါကနည်းနည်းခြစ်မိလိမ့်မယ်၊ ငါတို့ကိုသံသယဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ရွှေရောင်အရောင်တွေရဲ့အရင်းနှီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေကိုတောင်ချန်ထားလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်အိမ်သာစက္ကူခြယ်ချင်တယ် အမေဇုံတွင်သင်သည်ရွေးစရာလမ်းနည်းနည်းမျှသာမဟုတ်တော့ဘဲအိုဘားမား၏မျက်နှာနှင့်ပင်တွေ့နိုင်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ။
Amazon မှတစ်ဆင့်ယူရို ၅၀၀ အိမ်သာစက္ကူကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည် ဒီမှာ.
မင်းအကြောင်းမင်းမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဒီပစ္စည်းကိုအမေဇုံမှာတွေ့တော့ငါမြင်ခဲ့တာကိုမယုံနိုင်တဲ့အတွက်အကြိမ်များစွာဖွင့်ပြီးပိတ်ခဲ့တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လူတိုင်းကိုငါကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့မသွားဘူး၊ နောက်ဘယ်လိုထွက်လာမလည်းဆိုတာကိုငါမပြောတော့ဘူးဆိုတာကိုလူတိုင်းကိုသတိပေးခဲ့တယ်။
ငါပြောမယ် GoGirl လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးဆီးသွားပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မိန်းကလေးများအားဒုက္ခပေးသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းသူတို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆီးသွားရန် (သို့) ဆီးရန်ခွင့်ပြုသည်။။ ဒီကနေတစ်ယောက်ချင်းစီကသူလိုချင်တာကိုမြင်ယောင်ကြည့်သည်။ ၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်၊ အထူးသဖြင့်ဆီးကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားပုံနှင့်မည်သည့်နေရာမှမည်ကဲ့သို့ဖယ်ရှားသည်ကိုစဉ်းစားသည်။
သင်သည်ဤ GoGirl အမျိုးသမီးဆီးအင်္ဂါကို Amazon မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
ဒါပေါ့ ဤဆောင်းပါး၌ GoGirl ၏အဓိပ္ပါယ်မဲ့မှုသည်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင်အမျိုးသားများအတွက်ဆီးအိမ်ပျောက်နေမည်မဟုတ်ပါလူသည်မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဆီးသွားနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆလျှင် ပို၍ ပင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။ အမှု၌သာလျှင်သင်သည်ဤစားသောက်ခန်းမကိုသင့်၏ကျောပိုးအိတ်ထဲ၌သယ်ဆောင်။ သင်ဒုက္ခရောက်နေသည့်နေရာ၌ဆီးကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။
သင်အမေဇုံမှတစ်ဆင့်အမျိုးသားများအတွက်ဒီသယ်ဆောင်နိုင်သောဆီးအိမ်ကို ၀ ယ်နိုင်သည် ပထမနေဖြင့်အိတ်ဆောင်ဆီးလမ်းကြောင်း ...ဒီမှာ" /]။
ပထမ ဦး ဆုံးဝန်ခံရမယ်၊ ရာပေါင်းများစွာသောဆောင်းပါးတွေရေးတဲ့ငါဒီစာရင်းကိုရေးတဲ့နေ့မှာဒါကိုငါတွေ့ပြီ multifunctional ခါးစညျးရှေ့ဖုံး အတော်လေးစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ဆောင်းပါးရေးနေချိန်မှာငါကအဲဒီမှာလုပ်ဆောင်ချက်အတော်များများရှိနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်၊
ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးယူရို ၂၀ ထက်မပိုသောခါးစညျးရှေ့ဖုံးသည်ဘာဘီကျူးများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအရာအားလုံးအပေါ်ထိပ်သို့သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဘီယာကနေရေအထိ၊ ငါတို့ချက်ပြုတ်ထားတာတွေကိုပေါင်းထည့်နိုင်တဲ့ဝက်အူချောင်းတွေအားလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားတယ်။ နည်းနည်းစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်မဟုတ်လား။ ထိုထက် ပို၍ ပင်ဤမျှကြီးမားသောအရာများပြည့်နှက်နေသည့်ဤခါးစညျးရှေ့ဖုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်.
သင်ဤအမျိုးစုံသောကင်ကင်ဆေးခါးစည်းကို Amazon မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်သာမန်လူတစ်ယောက်သည်နှုတ်ခမ်းနီကိုဘေကွန်ကဲ့သို့အရသာရှိလိုပါသလဲ။။ ငါအများကြီးပြောနိုင်ပေမယ့်ဘယ်သူမှသိပ်စိတ်မ ၀ င်စားနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါသူတို့ကိုငါဝယ်ချင်စေချင်တယ်။ Amazon မှာဘယ်သူမဆိုဝယ်လို့ရမယ့်နောက်ထပ်စိတ်ပျက်ဖွယ်အရာတစ်ခုကိုငါမင်းကိုဆက်သွယ်ထားတယ်။
သင်သည် Amazon မှတစ်ဆင့်ဘေကွန်အရသာရှိသောနှုတ်ခမ်းမုန့်ကို ၀ ယ်နိုင်သည် Bacon Lip Balmဒီမှာ" /]။
က Nicolas Cage ကူ
ငါ Nicolas Cage ပရိသတ်တွေ (တကယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိပါသလား) အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ရမှာပါ။ ဒီသရုပ်ဆောင်မင်းရဲ့ကူရှင်ကလုံးဝစိတ်ပျက်စရာမကောင်းဘူးလို့ထင်ရပေမယ့်ငါ့အတွက်တော့မင်းအတွက်အများစုအတွက်တော့ဒါထက်ပိုပါတယ်။ absurd ထက်ပိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းပါတယ်။
တောက်ပြောင်နေသောမဂ္ဂဇင်းများမှကျော်ကြားသူများထက်ပိုပြီးခေတ်မမီသောနီကိုလပ်စ်ကေ့ခ်ျခေါင်းအုံးပေါ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာသုံးစွဲခြင်းသည်တကယ်ပင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်မဟုတ်လော။။ စကားမစပ်၊ မင်းကိုငါပြခဲ့တဲ့ဒီဟာကမင်းကိုမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင် Amazon ဟာမင်းရဲ့ကွဲပြားတဲ့ကူရှင်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်၊ ​​ပိုပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။
သင်ဤ Nicolas Cage ခေါင်းအုံးကို Amazon မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ဒီမှာ" /]။
ဒီစိတ်ပျက်ဖွယ်ဆောင်းပါးကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်မပြောနိုင်တာလဲ Amazon မှာ ၀ ယ်ယူလို့မရတဲ့စိတ်ပျက်ဖွယ်ဆုံးနဲ့စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဤ ပလတ်စတစ်အုန်းနာသည် ၀ ယ်သူမည်သူမဆိုစွန်းထင်းခြင်းမရှိဘဲမိမိကိုယ်ကိုသက်သာစေသည်။ အရင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ထပ်ရှင်းပြချက်မပေးတော့ပါ၊ တစ် ဦး ချင်းစီကိုစိတ်ကူး။ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်၎င်းတို့ကိုရယူလိုပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်မအကြံပြုလိုတော့ပါ၊ ရေချိုးခန်းရှာရန်။
ဒီအရာတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်ဆုံးကတော့ဒီအမှိုက်သရိုက်အိတ်ကို ၁၀ ဒေါ်လာနီးပါးလောက်တန်သင့်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကသင့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလုပ်နေစဉ်သင်စီးပွားရေးလုပ်နေစဉ်သင်ဝတ်ဆင်နိုင်တယ်။ ။
Amazon မှတစ်ဆင့်စွန်းထင်းခြင်းမရှိဘဲသင်သက်သာစေရန်ဤ poncho ကိုသင်ဝယ်နိုင်သည် အိတ်ဆောင် ၁ ခု ...ဒီမှာ" /]။
သင်သည်ဤစာရင်းရှိအရာဝတ္ထုများကိုမည်မျှစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းနေစေကာမူ ၀ ယ်ယူမည်လော။။ ဤစာမူသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်လူမှုကွန်ယက်များမှမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » အမေဇုံ » အမေဇုန်တွင်သင်ဝယ်ယူနိုင်သောစိတ်ပျက်ဖွယ်အရာများ (၉) ခု
လူသား၏ဆီးအိမ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာမရှိဟုထင်ရသည်၊ ရောဂါများကြောင့်ပြပ်ဝပ်နေသောလူမည်မျှရှိသည်ကိုသူတို့မသိကြသောကြောင့်သူတို့ထုတ်ဝေသောအရာများကိုမလေ့လာကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy Note5Vs Samsung Galaxy S6 edge + သည် S-Pen ၏စွမ်းအားသည်ပြီးဆုံးမည်လော။
Samsung Galalaxy S6 edge + သည်ယခုတရားဝင်ဖြစ်သည်